Nisy mpanao pirinty vita pirinty vita pirinty China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Natonta pp strapping,Ny fanontana Pp strapping,Fikaon-damba fonosana
Home > Products > Strapping > Famandrihana PP > Nisy mpanao pirinty vita pirinty vita pirinty
Ny fampiasana fitaovana vaovao, ny fanafarana fitaovana, ny fitaovana mahazatra dia manamboatra fametahana vita pirinty, manana hery manintona mafy, ny pirinty vita pirinty dia araka ny filàn'ny mpanjifa, ny fanaovana pirinty, ny teny ao aminy, avelao ho fantatra tsara ny marika, ny fanaovana pirinty dia misy fiantraikany amin'ny dokambarotra. Ny halavan'ny fanoratana pirinty dia 5 ka hatramin'ny 19 mm, ny hateviny dia 0.45-1.3 mm,, herin'ny tensile dia 40 ka hatramin'ny 300 kg. Afaka manao tarika fonosana vita pirinty natao.
Manolotra serivisy OEM sy ODM, manaova ny vokatra tadiavinao !
Ny fitaovana fototra ho an'ny famokarana horonantsary YALAN stretch dia Exxonmobil sy Petrochemical Industries Co., Ltd.Use Exxonmobil LDPE sy LLEPE sns, izay manana fihenan-kevitra miavaka, fiantraikany ary fihenan'ny fanoherana fananana. Miaraka amin'ny fitaovana vaovao 100% hiantohana ny fihenan'ny elatra ambony kokoa amin'ny hery misintona ary ny hery misintona mafy
Loko samy hafa amin'ny fonosana fonosana:
P fanodinana rod:
Mihevitra ny fahatsoram-po isika, kalitao ary ho tonga lavitra-lokking ary tsara raha hiantoka ny tombotsoanao sy mahafeno ny filanao.Yalan dia hanome serivisy sy vokatra tsara kokoa hamerenana ny mpanjifa sy ny fikarakarana ny mpanjifa.
Natonta pp strapping Ny fanontana Pp strapping Fikaon-damba fonosana pp strapping Ny tsara Pp strapping Plastic Pp strapping metal strapping Pet strapping